Odayaasha Beelaha Tigray iyo Eritrea oo Shir ku Leh Meel u Dhaxaysa Labadooda Degaan – Rasaasa News
Odayaasha Beelaha Tigray iyo Eritrea oo Shir ku Leh Meel u Dhaxaysa Labadooda Degaan
Apr 9, 2010 Eritrea, shir, Tigray
War lagu qoray bogg internet ah oo lagu qoro luuqada afka Tigranyaga ayaa waxay qortay in uu shir u socdo odayada labada beelood ee Tigray iyo Eritrea. Heshiiskan oo lagu rajo weyn yahay in uu ku dhamaan doono is faham ayeyna labada xukuumadood shaqo ku lahayn. Waxaana la saadaalinayaa in uu wada xaajoodkani soo af jari doono colaad dheer oo dhextaalay labada dal, kaas oo ay UN-tu u caalwayday.
Qoomiyadaha Tigray iyo Eritrea ayaa ah labada qoomiyadood ee isu dhaw dhan walbaba, qoomiyadaha Itobiya, waxayna ahaayeen labadii Jabhadood ee xukunka ka tuuray Mingeste Xayle Maaryam, kolkii dambana iyaga oo aan raacin shuruucda UN-ta ayey si dhib yar Eritrea u heshay xornimadii ay u dagaalamaysay iyada oo aan la war galin qoomiyadaha kale ee Itobiya.
Labada xukuumadood ayey mid waliba ku dadaalaysaa sidii ay iyadu u bixin lahayd kharajka fadhiga odayaasha Tigray iyo Eritrea uga socda xuduuda labada qoomiyadood. Lama saadaalin karo waxa ka soo bixi doona shirka odayaasha, waxaase dhab ah in odayaasha labada dhinac ay ka xoog badan yihiin labada xukuumadood, marka laga eego xaga dhaqanka iyo xidhiidhka labada Qoomiyadood.
Afka Tigranyaaga ayaa ah mid ay ku wada hadlaan waxna ku qoraan labada qoomiyadood. Hadii ay heshiis keenaan odayaasha beeluhu ayaa waxay keeni doontaa in hada ka dib khilaafyada dhex mara dawladaha Afrika in ay UN-tu kala xaajooto odayaasha qoomiyadaha dalalka Afrika.
Shirka oo si qarsoodi ah ku socdaa ayaa sida la sheegayo waxaa uu ku socdaa jawi farxadeed iyo gacal kala maqnaa oo isu yimid. Hadii ay heshiis keenaan odayaasha labada beelood waxay dawo u noqon kartaa nabad in ay geeska Afrika ka dhalato nabad cimri gaaban ka hore inta uuna dagaal kale ka dhicin geeska.
Holaaladii Hoday Halganka ONLF oo Haatan Hog u Qodaya, Haybta Absame
Gunmen in Ethiopia’s volatile Ogaden region kill Briton contracted to oil giant Petronas